အတုများရှိလာသဖြင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင် သက်သေခံ လက်မှတ်များ၏ လုံခြုံရေးကို အဆင့်မြှင့်မည် - Yangon Media Group
အတုပြုလုပ်မှုများရှိနေသဖြင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်များကို လုံခြုံ ရေးအဆင့်မြှင့်တင်သွားရန် စတင်စီစဉ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတုပြုလုပ်၊ ဖြန့်ဝေသူများ ဖမ်းဆီးရမိထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဇွန် ၂၅ ရက်က ကညနရုံးတွင်ပြု လုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာန(ကညန)မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလျန်ကျင့်မန်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်တွေကို လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ စတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ အဲဒါတွေက စာရွက် တွေအပေါ်မှာ လုံခြုံရေးစနစ်လုပ်ရမှာဆိုတော့ အကုန်အကျတော့များနိုင်တယ်။ နည်းပညာတွေတော့ အဆင့်အမြဲမြှင့်သွားရမှာပဲ။ အတုလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ နည်းပညာတွေကလည်း အဆင့်လိုက်မြှင့်နေတာဆိုတော့”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်အတု ကိုင်ဆောင်ထား မိသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ကားများကို သက်ဆိုင်ရာခရိုင်၊ တိုင်းကညနရုံးများတွင် ဇွန် ၆ ရက်မှ စတင်ကာ စစ်ဆေးပေးနေပြီး ယခုအထိ လာရောက်စုံစမ်းအကြောင်း ကြားသူသုံးဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောသည်။
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတုများသည် မီးထိုးခံနိုင်ခြင်း၊ လိုင်စင်ကတ် ပြားပေါ်ရှိ Chip ပြားပါ အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း Chip ပြားအတွင်း ဒေတာများထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကတ်ရှိ Chip ပြားအတွင်းထည့်သွင်းထားသော ဒေတာများကို ပြောင်းလဲထည့်သွင်းရန်လည်း စီစဉ်ထားကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် နီလေးညိုဆိုသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ဖြင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင် သက်သေခံလက်မှတ်ဆောင်ရွက် ပေးနေကြောင်း ကြေညာထားသဖြင့် ကညနမှ အသွင်ယူကာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့၊ နေပြည် တော်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့နှင့် ပူးပေါင်း ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ အတုပြုလုပ်သူနှစ်ဦးကို ယခုအပတ်အတွင်း ဖမ်းဆီးမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်ပထမပတ်အတွင်း ဝေယံဆိုသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ဖြင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဆောင်ရွက် ပေးနေသည်ဟု မြန်မာ၊ တရုတ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာများဖြင့် ကြေညာထားချက်အရ ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ခြောက်ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း၊ ကညနရုံးတွင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပိတ်ခံထားရသူတစ်ဦးအား ငွေကျပ်နှစ်သိန်းခွဲဖြင့် လိုင်စင်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုဆိုသည့် အတုလုပ် ဆောင်သောအဖွဲ့မှ လေးဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
”အပြင်မှာ ကောလာဟလက ဒီလိုင်စင်တွေသည် ကညနက ဝန်ထမ်းတွေမပါဘဲ ဘယ်လိုထွက်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုး အမျိုးမျိုးအ ထင်လွဲတာတွေရှိတယ်။ ဒီလိုမျိုးမိ ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေ မပါဘူး၊ မဟုတ်ပါဘူး၊ မလုပ်ပါဘူးဆိုတာကို သက်သေပြ နိုင်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ၎င်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောသည်။ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်နှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတုပြုလုပ်သူများကို တောင်ဥက္ကလာနှင့် သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းတို့တွင် ကညနမှ အမှုဖွင့်ထားသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဧပြီလကုန်အထိ မှတ်ပုံတင်ယာဉ်စီးရေ ရှစ်သိန်းရှစ်သောင်းကျော်ရှိပြီး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်စုစုပေါင်း ခုနစ်သိန်းခုနစ်သောင်းကျော်ခန့် ထုတ်ပေးထားကြောင်း ကညနစာရင်းအရ သိရသည်။
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး နှောင့်ယှက်မှုများကြောင့် မြန်မာအပါအဝင် အာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံများတွင် စီး??
ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ကို ဗိုလ်တထောင်ထဲသို့ ထည့်သွင်းပြောင်းရွှေ့ရန်မှာ အခြေခံဥပဒေအရ ခက်ခဲဟုဆု??
မီတာခဈေးတက်မည်ဟု စကားဦးသန်းစဉ် ကြားလိုက်ရသော ကန့်ကွက်သံများမှာ တနင်္သာရီပြည်သူတို့၏ အသည်?
နည်းပြဟောင်း ဖာဂူဆန်ကို မန်ယူအသင်း အကြံပေးအဖြစ် ပြန်လည် ခန့်အပ်ဖွယ်ရှိနေ၊ မန်ယူအသင်း၏ ဘော??
“The Haunting Of Hill House” ဒုတိယမြောက် Season ကို Netflix ပြသမည်
” ဝါရင့် အနုပညာရှင်တွေနဲ့ အတူတူ တွဲလုပ်ရတာကိုက ညီမအတွက်တော့ စွန့်စားခန်းတစ်ခုပဲ” ယဉ်လက်